नेपालमा कोरोना संक्रमण दर ५ प्रतिशत कम, डराउन नपर्ने विज्ञको भनाइ - यथार्थ खबर
Rojjan Raj Pandey ३ मंसिर २०७८, शुक्रवार
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम भएसँगै समाजका हरेक गतिविधि लयमा आउन थालेका छन् । पठनपाठनदेखि सरकारका महत्वपूर्ण बैठक मानिसको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुन थालेका छन् ।
संक्रमितको संख्यामा कमी आएको संक्रामक रोग विशेष डा. शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ । यद्यपि अहिले पनि दैनिक ४/५ जनाको मृत्यु भइरहेकाले सचेत भने बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
हाल संक्रमण बढेका केही देशमा डेल्टा भेरियन्ट नै देखिरहेका कारण पनि नेपालमा जोखिम नबढेको संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा प्रभाव जमाइसकेको डेल्टा भेरियन्ट नै ती देशमा देखिएका कारण पनि तत्कालका लागि यहाँ जोखिम नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।
भाइरसविरुद्ध खोप लगाउनेको संख्या समेत बढिरहेका कारण पनि संक्रमण दर कम भएको विज्ञहरूको ठहर छ । अन्य विकसित देशको तुलनामा नेपालमा खोप लगाउने संख्या बढिरहेका कारण पनि संक्रमण फैलिन नपाएको हुनसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । हाल दुवै डोज खोप लगाउनेको संख्या २५ प्रतिशत माथि छ ।imagekhabar